Joogto ah Shirkadaha – Red Sea Energy
Laga bilaabo 2169((eks.mva)) karoon bishii.
Waxaan ku raacsanahay heshiiska korontada shirkadda Red Sea Energy AS. Waan aqbalay dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha asturnaanta. Qiimuhu waa VAT bilaash (MVA/moms). Waxaan aqbalay in shirkaddaydu bixiso bil kasta isla qiimahaas. Haddii wax isbeddelo ah lagu sameynayo qiimaha go’an, Red Sea Eenergy AS ayaa iiga digi doonta 1-3 bilood kahor intaan isbeddelladu dhaqan gelin. Ma jirto lacag qarsoon.